शक्तिशाली पासपोर्टको रुपमा रहेको कोरियाली पासपोर्टमा ब्यापक हेरफेर ! – Kantipur Press
शक्तिशाली पासपोर्टको रुपमा रहेको कोरियाली पासपोर्टमा ब्यापक हेरफेर !
पासपोर्टको बाहिरी डिजाइन यस भन्दा पहिले हरियो रङको हुने गरेको भएता पनि अब भने निलो रङको हुनेछ। पासपोर्टको पहिलो पृष्ट सउल नेशनल युनिभर्सिटीका फाइन आर्ट प्रोफेसर किम सु जुङले डिजाइन गरेका हुन। यस पेजमा कोरियाका एतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाका चित्रहरु रहेका छन। १० बर्ष अवधि रहेको नयाँ पासपोर्टका पेज यसअघि ४८ वटा भएकामा अब भने ५८ वटा हुनेछन। त्यसैगरी ५ बर्षका लागि बनाइने पासपोर्टको पेज संख्या यसअघि २४ वटा हुने गरेकामा अब भने २६ वटा हुनेछन।ईपिएस साथी
दुब्लो देखिए किम जोङ उन, अनुहार पनि फेरियो : नयाँ तस्बिर देखेर सबै चकित
कोरियामा यस्ता विदेशी कामदारको भिषा १ बर्ष थप !